Warbixin:Dunida Oo U Tartamaysa Iibsiga Xoolaheena & Tiradii Ugu Badnayd Oo La Dhoofiyay 2014 – idalenews.com
Muqdisho (INO) — Dalka Soomaaliya ayaa u iibgeeyay Xoolihii ugu badnaa Suuqyada Dibadda Sanadkii 2014, kadib 20 Sano ah oo Dagaal & Bur-bur dalka ku jiray.
Warbixin ay soo saartay Hay’adda FAO ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay u dhoofisay Dalalka Khaliijka Xoolo gaaraya 5 million, kuwaasi oo isagu jira Geel, Lo’ & Ari, iyadoo Ganacsatada Xoolaha dhoofiyay Lacagta kasoo gashay ay gaareyso $360 million.
Suuqyada Dalalka Khaliijka Carabta ayaa la geeyay 4.6 million (Afar Milyan & Lix Boqol oo Kun) oo Ari ah, 340,000 (Saddex Boqol & Afartan Kun) oo Lo’ ah iyo 77,000 (Todobaatan & Todobo Kun) oo Neef oo Geel ah, sida ku xusan Warbixinta FAO.
Waa Xoolohii ugu badnaa oo laga dhoofiyo dalka Soomaaliya Mudo 20 Sano ah, waxaana FOA ay sheegtay in ay taasi ka danbaysay markii Midowga Yurub & Ingiriiska ay gacan ka geesteen Barnaamij loogu cirib-tirayay Xanuunada Xoolaha ku dhaca oo Soomaaliya laga hergeliyay dhawaan.
Xoolaha waa Udub-dhexaadka Dhaqaalaha dalka Soomaaliya, waxaana ay ka dhigan yihiin 40% Guud ahaan Dhaqaalaha Dalka, balse aan si fiican looga faa’ideysan Mudadii uu Burburka jiray.
“Tani waa Tallaabo Horumar leh oo usoo hoyday Wax soo saarka dhanka Xoolaha Dalka Soomaaliya, oo Maalgashi baaxad leh lagu sameeyay Mudooyinkii danbe si ay u noqota Soomaaliya Dalalka kuu tartamaya Suuqyada Caalamaka ee Xoolaha loo iibgeeyo,” ayuu yiri Wasiirka Xanaanada Xoolaha Soomaaliya Saciid Xuseen Iid.
Ganacsato kasoo jeeda Dalalka Saudi Arabia, Yemen, Oman, Kuwait Qatar iyo United Arab Emirates (UAE), ayaa ka faa’ideysanaya Fursaddda Maalgashiga ee ka jirta Wadanka Soomaaliya, oo hadda Dhaqaalihiisa soo kabsanaya.
Saudi Arabia, gaar ahaan waxay noqotay Dalka Xoolaha ugu badan ka iibsaday Soomaaliya Mudadii Lixda Sano ee lasoo dhaafay, kadib markii ay qaaday Boqortooyada dalkaasi Xayiraad 9 Sano socotay oo saarnaa Xoolaha Soomaaliya, sababtoo ah Cudurka Rift Valley.
Sanad Kasta, Hay’adda FAO waxay Talaashaa 12 million Neef oo Xoolaha Soomaaliy ah, gaar ahaan Ariga, oo laga talaalayo Xanuun Dilaa ah oo Virus Keena kaasi oo lagu magacaabo (PPR), waxaana Mashruucan maalgelinaya Midowga Yurub.
Iyadoo Dhaqaalo ahaan kaashanaysa Midowga Yurub & UK, Hay’adda FAO waxay ka fulisay Soomaaliya Mashaariic badan oo lagu hormarinayay Wax-soo-saarka Xoolaha & Dalaga Beeraha, oo loo tababaray Howlwadeeno & Dhaqaatiir Cudurada ka daaweeya Xoolaha.
Ugu dambeyntii FAO ayaa Shahaado gudoonsiiyay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, taasi oo ay ku cadeysay in Xoolaha Soomaaliya aysan qabin wax Cudur ah, islamarkaana u cadeysay Caalamka in la dhoofsan karo Xoolaha.
Idale News Online – Muqdisho
Dhageyso:VOA: Gudidii Farsamada Shirka Cadaado Oo La Kala Diray, Saamaynta Maamulka Puntlad iyo Xog Cusub
Dhageyso:Yuusuf Maxamed Siyaad Indha Cadde Oo Eed u Jeediyey Saxiixayaasha shirka Gobolada Dhexe